Fanandramana ho an'ny teny fanalahidy novolavolain'ny manam-pahaizana momba ny Semalt, Natalia Khachaturyan
Amin'ny ankabeazan'ny SEO fampielezan-kevitra, ny fampiasana teny fanalahidy dia afaka manampy ny tranonkala ambony avo amin'ny milina fikarohana . Na izany aza, misy ny famerana ny fampiasana teny fanalahidy, satria ny fampiasana tafahoatra azy dia antsoina hoe teny filamatra fototra. Ny fampiasana tsy mahazatra ny teny fanalahidy dia teknika mainty SEO izay nampiasaina nandritra ireo folo taona lasa - tecnicas de iluminacion caseras para fotografia aerea. Ankoatr'izay, Google dia nanavao ny algorithm ampiasain'i Penguin mba hisakanana ireo fomba tsy ara-dalàna tahaka ity iray ity ary ny famoronana tenimiafina dia tsy afaka manampy ny tranokalan'ny vohikala amin'ny aterineto intsony. Ankoatra izay, ny Strategist Content Semalt , Natalia Khachaturyan, dia nilaza fa ny fampiasana teknika toy izany dia mampitombo ny mety hisian'ny tranonkala hijaly amin'ny sazy miharo lalao ary koa ny fialan-tsiny.
Nahoana no tsy tsara ny famoronana tenimiafina
Ny lanjan'ny votoaty dia lasa lohahevitra vaovao izay manome ny laharam-pahamehana Google. Miaraka amin'ny teny fanalahidy, dia matetika ianao no mampiditra ao anaty votoaty be loatra izay mety ho tsy mifanaraka amin'ny mpampiasa anao. Ny fitenenana votoatiny maro dia mety hahatonga ny votoatinao ho tsy ilaina ho an'ny mpihaino anao. Tsy misy olona mikaroka tranonkala iray hijanona eo amin'ny pejy raha toa ka tsy mamaha ny tanjony voalohany ny votoatiny.
Ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mampiasa teny fanalahidy tafahoatra amin'izao vanim-potoana izao satria io fomba io dia tsy mandoa intsony ho fomba fisainana. Ankoatra izay, rehefa tsy manan-danja ny votoatiny dia lasa ambany ny fotoana andalovan'ny tranokala.
Teny fanalahidy natao tamin'ny asa
Mora ny mamaritra ny fampiasana tsy ara-nofo ny teny sasany ao amin'ny tranonkala iray. Isaky ny mijery fehezanteny iray ianao, ny tranokala voalohany dia tokony hanome fampahalalana mahaliana. Ny sasany amin'ireo ohatra amin'ny olona mampiasa ny teny fanalahidy dia ahitana:
Famaritana ahitana ny anaran-toerana sy tanàna ao amin'ny faritra izay miezaka ny mandrindra ny toerana..Ireo teny ireo dia manandrana mamely ny mpilatsaka SEO eo an-toerana.
Lisitry ny laharana finday maro izay tsy manan-danja amin'ny votoatiny na votoaty atrehana.
Fomba tsy ara-dalàna amin'ny fanambarana miverimberina. Ohatra, "manana raozy mena isika mifanaraka amin'ny ilomanosanareo mena ao anatin'ity fitaratra mena ity eo amin'ny rose rose. Mena mena ny mena mena ary misy raozy maro. "
Ahoana no hahitana ny teny filamatra?
Ny iray amin'ireo fomba ahafahana mamantatra ny teny fanalahidy dia ny fanakanana ny votoatin'ny tranonkala. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ireo tranonkala misy teny fanalahidy dia mety ahitana fanazavana tsy misy dikany amin'ny teny fototra. Ny mpampiasa webmasters hafa dia mampiasa ny votoaty miafina izay ahitana ny teny fanalahidy. Amin'io tranga io, ireo mpampiasa webmasters dia mety tsy mampiasa takaitra kely iray, izay hita amin'ny loko mitovy amin'ny loko aforitra.
Azonao atao ny manasongadina ny zava-drehetra mba hampisehoana ireo teny fanalahidy nafenina. Fifehezana ny tsindry + Ny bokotra iray dia manasongadina ny votoaty rehetra. Ny fampidirana an'io votoaty io ho taratasy fanodinana teny dia tena ilaina. Ny olona sasany dia afaka mampiasa loko mitovy amin'ny lanjany eo amin'ny fototra, ka mahatonga azy ho tsy azo esorina.
Ho an'ny tetikasa e-varotra, ny fametrahana fampielezan-tsarimihetsika nomerika mahomby dia mety ho tetika tsara. Betsaka ny orinasa manao varotra an-tserasera amin'ny fampiasana fomba toy ny SEO. Ao amin'ny ankamaroan'ny SEO, ny fikarohana teny fanalahidy dia fomba fanao mahazatra amin'ny fahazoana teny fikarohana azo ampiasaina amin'ny votoatin'ny tranonkala. Ity teknika ity dia ahafahan'ny tranonkala ambony amin'ny SERPs amin'ireo fehezanteny manokana ireo. Na dia izany aza, ny fampiasana tafahoatra ny teny fanalahidy hamitahana ny fitaovam-pitadiavana dia mety hitondra any amin'ny sazy toy ny fandikana. Ny olona dia tokony hisoroka ny fampiasana teny manan-danja amin'ny fandefasana dizitaly dizitaly.